March 1, 2018 – HORNAFRIC MEDIA
Ruushka oo soo saaray hub noociisa aan horey loogu arag dunida & Putin oo ka hadlay +Sawiro.
Posted on March 1, 2018 by Queen Kiin
Madaxweyne Vladimir Putin ayaa shaaciyey in Ruushku uu soo saarey gantaal cusub oo aan la arki Karin, iyadoo hadalkana la sheegayo in Maraykanka iyo reer galbeedka aysan jecleysan. Putin ayaa sameeyey shaac bixintan ka gadaal markii uu aasaaska u dhigay hiigsiyo siyaasadeed, markiisii afraad ee uu xilka madaxweynenimo u tartamayo. Ruushka waxaa ka dheceyso doorasho, 17 maalmood gudahood taasoo la filayo in Putin uu ku guuleysto. Mr Putin wuxuu ka qeyb qaatay bandhig dhanka hubka…
C/wali Gaas oo kala diray Maamulka Boosaaso & Mid cusub oo KMG ahna magacaabay
Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo kala diray xubnaha golaha deegaanka ee magaaladaas ayaa soo magacaabay xubno cusub oo sii wada doono shaqada socotay, waxaana si gaar ah Madaxweynuhu u magaacaby Duq iyo kuxigeen cusub. Wareegto ka soo baxday Xaafiiska Madaxweynaha Puntland ayaa lagu sheegay in ay xubnahan yihiin kuwa karti u leh howsha loo igmaday ee KMG-nimada maamulka magaalada Boosaaso. Duqa cusub ee la magacaabay ayaa ahaa wasiir kuxigeenka Wasaaradda Maaliyada ee hadda…
Imaaraadka oo ku xadgudbay Dowladda Somalia iyo Shirqool loo dhigay Ra’iisal Wasaare Kheyre (Akhriso)
Dowladda Imaaraadka Carabta ayaa ku dhaqaaqday tallaabadii ugu weyneyd ee ay ku faragelineyso Qaranimada Soomaaliya kadib markii heshiis lagu muransanaa oo ay la gashay maamulka gooni u goosadka ah ee Somaliland ay ku soo dartay Itoobiya. Heshiis lagu saxiixay magaalada Abu Dhabi maanta ayaa lagu shaaciyay in maamulka dekadda Berbera ee hore ay shirkadda DP World ula wareegtay lagu soo kordhiyey dalka Itoobiya oo ku yeelan doona 19% saami gaaraya. Dowladda Imaaraadka Carabta ayaa hore…
Muqdisho Wasiir lagu Ganaaxay Arrin Yaab leh oo Lagu Arkay Gurigiisa ?
Warar hoose oo helnay ayaa sheegaya in lacag dhan Hal Milyan oo Shiilinka Soomaaliga ah lagu ganaaxay Wasiir ku xigeenka Wasaaradda Arimaha Gudaha Soomaaliya. Dowladda Hoose ee Xamar ayaa la sheegay iney ka danbeysay ganaaxa Xaaji Cali Sheekh Maxamed Nuur oo ah Wasiir ku xigeenka Wasaaradda Arimaha Gudaha Soomaaliya, oo lagu arkay gurigiisa hortiisa qashin yaaal, taasina ay sababtay inuu wasiirka dhiibo ganaaxa dowladda hoose ee xamar ay ku riday. Dhacdadan ayaa waxaa laga hadal…